आजको राशीफलः २०१७ / ११ / १० - Samudrapari.com
आजको राशीफलः २०१७ / ११ / १०
प. वेदनिधि तिमिल्सिना
९४५ पटक हेरिएको
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ): पारिवारिक सुख मिल्नेछ । आर्थिक कारोवारमा सामान्य सुधार देखिन्छ । आलस्यता बढ्नेछ । आफ्ना कारण अरुलाई पनि फाइदा हुनेछ । खर्च बढ्न सक्छ ।
वृष (इ, उ, ए, ओ, वा, वि, वु, वे, वो): साहास,धैर्यता र पराक्रम बढ्नेछ । आफ्ना काम अधिकाँश आफै गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । व्यापार व्यवसायबाट आय आर्जन बढ्नेछ । आफन्तबाट सहयोग पाईनेछ ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, हा): बोलिको प्रभावमा केहि काम बन्नेछन् । कुनै पनि काम गर्दा होश नगुमाउनु होला । नोकरी तथा राजनीतिमा हात हाल्दा फाईदा नै हुनेछ । पराक्रम बढ्नेछ ।
कर्कट (हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो):उत्तम आसन प्राप्तिको योग देखिन्छ । काम गर्ने जोश जागर घट्ने छैन । व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगतिका सम्भावना देखिने छन् । सामाजिक प्रतिष्ठा बढ्नेछ ।
सिंह (मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे): कहि कतैबाट हिलो छ्र्याप्ने काम हुन सक्छ सतर्क रहनु होला । मनमा कुरा खेल्नेछन् । व्यापार व्यवसायबाट मुनाफम लिन सकिने छैन । व्यर्थको घुमाई फिराई हुनेछ ।
कन्या (टो, पा, पी, पु, ष, ण, ठ, पे, पो): अशाका किरण उदाउने छन् । आएको अवसरको पूर्ण सदुपयोग गर्नु होला । व्यापार व्यवसायबाट सोचे भन्दा राम्रो आम्दानी हुनेछ । पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ ।
तुला (रा, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते):मनोवाञ्छित कार्य सफलताले मनमा उमङ्ग बढ्नेछ । रोकिएका काम पनि सहज रुपमा सम्पादन हुनेछन् । नयाँ कामको अवसर आउन सक्छ । मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ ।
वृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु): आस्था र विश्वास बढ्नेछ । भाग्यले थोरै साथ दिनेछ । परोपकारी काममा सहभागि हुने अवसर आउनेछ । आफुले गरेका कामबाट अरु लाभान्वित हुनेछन् । यात्रा हुन सक्छ ।
धनु (ये, यो, भा, भि, भु, धा, फा, ढा, भे): दैनिक काम काजमा रोकावट आउनेछ । व्यापार व्यवसायमा गिरावट आउनेछ । मनमा नानाथरिका कुरा खेल्ने छन् । शारीरिक थकावट बढि हुनेछ । खर्चको मात्रा बढ्नेछ ।
मकर (भो,जा,जि,जु,जे,जो,ख,खि,खु,खे,खो,गा,गि):जीवन साथिको सहयोगमा केहि काम बन्नेछन् । फलदायी यात्राको सम्भावना देखिन्छ । काम गरेर आत्म सन्तुष्टि मिल्नेछ । व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुनेछ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, दा): अरुको चक्रव्यूहमा पर्नु होला काम गर्दा होशियार रहनु होला । सामान्य काम सम्पन्न गर्न पनि बढि मेहनत गर्नु पर्नेछ । व्यापार व्यवसायबाट लाभ लिन सकिनेछ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, चा, चि): उच्चमानोबलका साथ काम गर्नु होला । काम गर्दा भ्रम उत्पन्न हुनसक्छ । समयमा काम गर्न सकिएन भने अवसर अरुले लिन खोज्नेछन् । व्यापारबाट अल्प लाभ हुनेछ ।
निर्वाचन दिवस भव्य रुपमा मनाइने
स्कुल नआएको भन्दै विद्यार्थीलाई निर्मम कुटपिट, ‘झन्डै हात काट्नुपर्‍यो’
केटाकेटीलाई लुगा कस्तो लगाइदिने ?
प्रधानमन्त्री ओली आज बालुवाटार सर्ने